Apple yakagadzirisa mabhagidhi ekhibhodi muIOS 11.2 beta 2 | IPhone nhau
Musoro wenhau uchaita kuti vakawanda vafare, hatina mubvunzo, kunyange tichiri kufanira kuita zvakadzama bvunzo dzeichi mhedzisiro. Uye ndizvozvo iOS 11 kubvira payakatangwa iri kutambura nehondo isingaverengeke yemabhugi ayo Apple asina kujaira.
Imwe yeakaipisisa ikhibhodi, iyo auto-yekugadzirisa system iri kupa yakanaka yakaipa mhedzisiro mhedzisiro, iyo inowedzera kune inoshungurudza lag iyo inoita kunge isina mhinduro munguva pfupi ... Apple yakaitwa nematambudziko aya here? Zvanzi nekambani yeCupertino.
Sekureva kwemamwe midhiya enhau uye kunyanya maererano neApple pachayo maererano nemutauriri wayo. Ava vashandisi vekutanga vari kutaura kuti iyo inononoka kupindura nguva iyo iyo iOS 11 keyboard yave ichisangana kusvika parizvino iri kuvandudza zvinooneka pamwe neiyo inogadzira keyboard iyo, pakati pezvimwe zvinhu, inoshandiswa kuvhiringidza zita rekuti "Raúl" na "Raül" mune zvakasiyana muchiSpanish uye pasina chikonzero chiri pachena, rimwe rematambudziko madiki asi akawandisa atiri kusangana nawo muIOS 11. Chinhu chisina kukodzera kukambani yehunhu uye zvakatonyanya kufunga nezve mutengo wematerminal.
Kune rimwe divi, zvinoita sekunge maererano nebhatiri uye zvimwe zvakadzama, iOS 11 iri kutora iyo chaiyo nzira yekuve inoshanda sisitimu iyo yainofanirwa kuve, zvirinani kuve zvakakwana pakukwirira kweteminal yakakosha seiyo iPhone X. Nepo vashandisiwo zvavo vachakamirira yekupedzisira vhezheni yeIOS 11.2 yekugadzirisa matambudziko aya uye kutisiyira isu zvakare takagutsikana nezviri mukati me software. Tiri kuisa iOS 11.2 beta 2 kuti titarise kuvandudza kwakanaka kwesisitimu, pamwe nekushomeka kwayo. Isu tinoramba takaterera kuvandudzwa kweiyo iOS 11.2 zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple yakagadzika madhivha ekhibhodi muIOS 11.2 beta 2
Chii chaungandiudza pamusoro pemapikicha anoonekwa sekunge aibuda macloud macloud kunyangwe dai aive mafoto akatorwa kana kuchengetwa kubva muchigadzirwa chimwe chete, semuenzaniso kana ndiri kuzovaona kana kuvatumira, ndinofanira kumirira kuti vatore pasi
Samsung inorasikirwa neimwezve hondo neApple, ino nguva pamusoro peiyo "slide kuvhura" patent